Author: Goltitaur Mazujas
Kolkii uu ogaaday inuusan halkaasi koob biya ah ka kabbanaynin buu qolkii oo la moodo goob legdan dib uga gurtay isaga oo caydu afkiisa ka fanfaniinayso, degayna qol kale. Gabadhaydiiyeey, maal badni waalidkeed hadday gabari nin kaga maarmi lahayd adaa ugu horreyn lahaa, balse haddaynu dumar nahay rag baa naloo abuuray, sida raggaba annaga naloogu abuuray.
Ha yeeshee guud ahaan labada xaaladoodba, aqalgalku waxa uu ka faaxada yahay seminaar u billaabanaya labada aqalgelaya, gaar ahaan gabadha ka soo baxday caalamkii gabarnimada, una soo baxday caalam naagnimo. Ta sagaalaad iyo ta tobnaad: Ansaartu waxay Yuhuudda u arkayeen dad ka aqoon badan, saa darteed bay wax badan dhaqankooda kaga dayan jireen.
Ha isku nabin yaanu ku nicine, hana ka fogaan yaanu ku hilmaamine. Waxa markaasi wanaagsan in la isticmaalo waxyaabaha jilcisooyinka ah oo iyagu gelaya booskii dareerihii dabiiciga ahaa, buugq hawsha gelinta.
Waxaa maalin maalmaha kamid ah ii timid gabar leh uur shan bilood ah, ahna ardayad Jaamacad dhigata. Qaababkaan haweeneyda iyo ninkeedu waxay iskaga hor yimaadaan si fool-ka-fool ah, waxaana ay kala yihiin: Waxa laga yaabaa in rag badani kolka ay biyabbaxaan, u qaataan in hawshii galmadu ay dhammaatay, dabeetana intay dhinaca kale u jeestaan khuuro billaabaan, iyaga oon dheg jalaq u siin dhibaatooyinka uu falkoodaasi u geysanayo haweeneyda.
Last Drivers BHAISHAJYA RATNAVALI PDF
Waa inay casho aad u macaan, rabitaanka furta, nafaqo badanna leh u diyaarisaa ninkeeda. Ha degdegin saacado, raaxaxa iyo sanado badan baa ku horyaal aad sidaad doonto u raaxeysan karto eh. Kolka uu kalsoonidaasi kasbadana wax dhibaato ah kala kulmi maayo inuu siduu doono wax yeelo. Waxaa weliba habboon in ninka xaaskiisa loo aqalgeliyo habeenkii kolkay dunidu degto dadkuna jabaqda dhigo.
Ninyahaw noloshaada guur ha ku billaabin kufsi. Ta saddexaad iyo ta afraad: Waxa jira dhowr hab oo loo maraanmaro guufka naasaha loona kiciyo dareenkooda waxaana kamid ah: Gabadheydiiyeey, waddankaad ku dhalatay iyo gurigaad ku barbaartay waa tanoo waad ka baxaysaa, adoo aadaya dal aanad aqoon iyo nin aanad u baran la dhaqankiisa, ee maandhey u ilaali toban umuurood: Waxa isna jira xuub bekro daloolkiisu uu laab-laaban yahay, kana ballaar badan yahay kan koobaabinta ah, geedka ninkuna uu geli karo isagoon wax dillaac ah u geysan, gaar ahaan hadduu geedku ka dhumuc yar yahay sida caadiga ah.
Waase in biyabbaxa labaadna lagu soo af-jaraa isla gunaanadkii aynu soo sheegnay. Xuubku waxa uu markaasi dhalfada u qabsanayaa sida laastiigga oo kale, halkaasina haweeneydu waxay ku dareentaa xoogaa xanuun ah oo ay macaani ku dheehan tahay ka hadli mayno gudniinka fircooniga ah iyo gabadha la tolay, balse waxannu ka hadleynaa hablaha bekradii Eebbe u sameeyey qaba.
La soco waqtiyada uu wax cuno, uguna dadaal degganaanta waqtiga uu hurdo, maxaa yeelay gaajadu way gubtaa, hurdada oo lagu bar gooyaana way ka rraaxada.
Sidaasi daraadeed shaqooyinkii hore ee jirka vuurka ku soo kordhaya shaqooyin cusub oo aan hore loo aqoon. Ha farxin isagoo murugeysan, hana ismurjin isagoo faraxsan.
Halka ishiisu qabanayso la soco, halka sankiisu urinayana ogoow, oo yaanay ishiisu qurux mooyee wax kale qaban, sankiisuna udgoon mooyee wax kale urin. Waa bil isbarasho laba badan, laba naf iyo laba dabeecadood.
Last Drivers LE SCALE PENTATONICHE PDF
Gabadheydiiyeey, ninkaaga u noqo naag iyo hooyo labadaba.
gukrka Waxa intaa dheer, geedka oon cambarka wada geli karin, taasi oo markaasi yaraynaysa fursadda uur qaadista. Markaas buu Rasuulku Sallallaahu calayhi wasallam ugu duceeyey: You are commenting using your Twitter account. Gabadhii intay xanaaqday ayay billowday inay jejebiso alaabadii qolka taallay inta ay ka gaartay, kolkaasi buu dadkii hoteelka degganaa soo kala yaacay oo intii ay gabadha dhakhtar u dooni lahaayeen, u dalbeen ciidanka booliska, kuwii oo iyana intay qabteen oo xirxireen u gudbiyay cusbitaalka dadka waalan.
Waxa loo raaxad yahay inuusan ninku ka dul kicin xaaskiisa isla marka uu biyabbaxo, balse uu sugo ilaa iyadu iga kac ka tiraahdo. Haddii gabadha uu dhiig badani ka yimaado, taasi oo mararka qaar dhacda, waxa waajib ku ah inay intay dhabarka u seexato, ay labada cajar isku dhejiso, iyada oon waxba isdhaq-dhaqaajin, markaa isaga ayaa iskii iskaga joogsanaya, waana inaanay isku deyin inay joojiso amaba dhiiggaasi tirto.
Haweeneyda lafteeda waxa ku dhalanaya dareenkaasi mid la mid ah, iyada oo dareemaysa inay meel aamin ah ku jirto. Rasuulka Sallallaahu calayhi wasallam baa markaa weydiiyey gabadhii: Gabadha kolkii aan baaray waxa ii caddaatay in uusan jirin wax uur shan bilood ahi, balse ay jiraan wax aan garan waayey.
Afku sida daloollada kale ee jirka, aad buu u dareen jinsiyeed badan yahay. Qaabkaani aad buu u raaxo geliyaa haweeneyda, ha yeeshee waa uu daaliyaa ninka.